Contouring, bronzer and highlighter ပါဝင်ပါတယ်။
Contouring လုပျမှာလား - လှယျကူတယျ ၊ မွနျဆနျတယျနျော ! မိတျကပျဆရာတှသောမက အခုမှ မိတျကပျစလိမျးမယျ့သူတှတေောငျ ဒီ matt powderအခပျြလေးနှငျ့ဆို မကျြနှာကို ပုံစံခြcontourလုပျဖို့ လှယျတယျနျော၊ ဒီ မကျြနှာပုံစ့သှငျးဖို့ အရောငျ၊ ဘရှနျဇာအရောငျနှငျ့ ဟိုကျလိုကျတာအရောငျတှကေ ဘယျအသားအရောငျနှငျ့မဆို လိုကျဖကျညီစပွေီး အသုံးပွုရတာလညျး အရမျးကိုလှယျကူတယျ။ အဆငျ့၃ဆငျ့တညျးနှငျ့ ပွညျ့စုံစှာ contourလုပျထားတဲ့ မိတျကပျကို ရရှိစပေါတယျ။
Contouring လုပ်မှာလား - လွယ်ကူတယ် ၊ မြန်ဆန်တယ်နော် ! မိတ်ကပ်ဆရာတွေသာမက အခုမှ မိတ်ကပ်စလိမ်းမယ့်သူတွေတောင် ဒီ matt powderအချပ်လေးနှင့်ဆို မျက်နှာကို ပုံစံချcontourလုပ်ဖို့ လွယ်တယ်နော်၊ ဒီ မျက်နှာပုံစ့သွင်းဖို့ အရောင်၊ ဘရွန်ဇာအရောင်နှင့် ဟိုက်လိုက်တာအရောင်တွေက ဘယ်အသားအရောင်နှင့်မဆို လိုက်ဖက်ညီစေပြီး အသုံးပြုရတာလည်း အရမ်းကိုလွယ်ကူတယ်။ အဆင့်၃ဆင့်တည်းနှင့် ပြည့်စုံစွာ contourလုပ်ထားတဲ့ မိတ်ကပ်ကို ရရှိစေပါတယ်။